Kusvuta kwakashata sei kune muviri wako nepfungwa
Kusvuta kunokanganisa muviri wako sei
Kusvuta fodya utsi kunokuvadza zvakanyanya kuhutano hwako. Iko hakuna nzira yakachengeteka yekuputa fodya. Kuchinja mudzanga wako uchishandisa stogie, pombi, kana shisha hazvikubatsire kudzivirira njodzi dzehutano.
Midzanga ine zvinhu zvinosvika mazana matanhatu, mazhinji acho anogona kutowanikwa mumagetsi uye hookahs. Kana zvinhu izvi zvatsva, zvinogadzira zvinopfuura zviuru zvinomwe, makemikari, akaiswa paAmerican Lung Association. Mazhinji emakemikari aya anokuvadza pamwe neanenge makumi matanhatu nematatu eaya anosanganiswa nekenza.
MuUnited Says, huwandu hwekufa kwevasvuti hwakapetwa katatu pane hwevanhu vasina kumboputa fodya. Chaizvoizvo, iyo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inotaura kuti kusvuta ndechimwe chezvinhu zvakajairika "chikonzero chekufa" muUSA Chiti. Sezvo mhedzisiro yekusvuta ingangodaro isiri yekukasira, matambudziko nekukuvara kunogona kugara kwenguva yakareba. Chinhu chakanaka ndechekuti kurega kuputa kunogona kudzosera mibairo mizhinji.
Chimwe chezvinhu zvinosanganiswa mumudzanga mushonga unochinja mafungiro unonzi nicotine chaiyo. Chikakananda chaicho chinosvika muuropi hwako mumasekondi mashoma uye chinoita kuti unzwe uchikosheswa kwekanguva. Asi sezvo mhedzisiro yacho painopera, iwe unonzwa kuneta uye unoshuva zvimwe. Chikakananda chaicho chinogadzira tsika, ndosaka vanhu vachiona kuputa kwakanyanya kumira.
Kurega kwemuviri kubva pachikakananda chechokwadi kunogona kukuvadza kushanda kwako kwekuziva uye kuita kuti iwe unzwe kunetseka, kugumbuka, uye kushushikana. Iko kusagadzikana kunogona zvakare kukonzera kutemwa nemusoro uye kuzorora matambudziko.
Paunofema muutsi, urikudya makemikari anogona kukuvadza nzvimbo yako yemapapu. Pakupedzisira, kukuvara uku kunoguma nematambudziko akati wandei. Pamwe pamwe nehumwe hutachiona, vanhu vanosvuta midzanga vari mumikana yepamusoro yekusagadzikana mapapu mamiriro akadai se:
emphysema, kukuvadzwa kwemasaga emhepo munzvimbo yako yemapapu
kuramba bronchitis, kwenguva refu-bloating iyo inokanganisa liner yekufema uye kufuridzira machubhu emapapu
chisingaperi obstructive pulmonary chirwere (COPD), akati wandei mapapu zvirwere
Iko kushaikwa kwezvigadzirwa zvefodya kunogona kukonzera kuzara nekukasika uye marwadzo ehurongwa hwekufema zvikasadaro nzvimbo yako yemapapu uye nendege dzinotanga kugadzirisa. Yakagadziridzwa mamukisi kusika uchangosiya fodya fodya chiratidzo chinotaridza kuti kufema kwako kuri kupora zvechokwadi.
Vana vane vabereki vanosvuta fodya vari panjodzi yekukosora, kufema, uye zvikamu zveasima kupfuura vana vane vabereki vasingadaro. Uye zvakare, ivo vanowanzove neakakwira mwero wemabayo uye bronchitis.
Kusvuta fodya utsi kunokuvadza yako yese yemoyo chirongwa. Kusvuta kunokonzera ngarava dzeropa kuti dzisimbe, izvo zvinodzivirira kutenderera kweropa. Sezvo nguva inopfuura, kuramba uchidzikira, pamwe nekukuvara kune ngarava dzinofamba neropa, kunogona kukonzera chirwere chetsinga chirwere.
Kuputa fodya kunowedzerawo kumanikidza kweropa, kunetesa ropa rerwizi chikepe dhizaini nzvimbo, uye kunowedzera kuwanda kweropa. Neumwe neumwe, izvi zvinowedzera njodzi yako yekurohwa nemoyo.
Iwe zvakare uri munjodzi yekuvandudza yekudzika pasi kurerekera padanho repakati matambudziko kana iwe wakambove nekuona kwepakati sidestep kuvhiyiwa, wepakati siteki, kana stent iri mune reropa chikepe.
Kusvuta fodya hakungokanganisa hutano hwako hwemwoyo, asiwo mamiriro ehutano hweavo vakakukomberedza vasingasute. Kuzivisa kune vanosvuta avo vane njodzi yakafanana kune munhu asingasvuti nekuti mumwe munhu anosvuta midzanga. Njodzi dzinosanganisira yekurova kwepamoyo, yepakati kurwisa, uye chirwere chepakati.
Integumentary system (ganda, bvudzi rinopisa, uye zvipikiri)
Zviratidzo zvikuru zvinoonekwa zvekusvuta zvinosanganisira ganda ganda uye ganda rinoshanduka. Zvinhu zviri mumidzanga zvinonyatso shandura chimiro cheganda rako. Ongororo yazvino inopa yakaratidza kuti kusvuta fodya zvakanyanya kunomutsa njodzi ye squamous cell carcinoma (gomarara reganda).
Nzara dzako nenzara dzekunzwa hadzisi dziviriro kubva pamhedzisiro yekusvuta. Kusvuta kunomutsa mukana wehutachiona hwechipikiri zvipikiri.
Bvudzi rakashata rinokanganiswawo neiyo nicotine chaiyo. Chidzidzo chekare chakawana ichi chichiwedzera chakakombama kukiya kurasikirwa, kuita balding uye kuchena musoro.
Kusvuta fodya kunowedzera mukana wemukanwa, wehuro, wedokoriro, uye kenza yegurokuro. Vakasvuta vanewo mwero wakakwira wepancreatic cancer. Kunyangwe avo "vanosvuta asi vasingafeme" vanosangana nenjodzi huru yekukuvara mumuromo.
Kusvuta kunopawo simba kune insulin, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuti iwe ugadzire insulin kuramba. Izvo zvinokuisa iwe panjodzi yekuwedzera yerudzi rwechipiri chirwere cheshuga pamwe nezvinetso, izvo zvinogona kukura nekukurumidza kupfuura kune avo vasingapute fodya.
Zvepabonde uye nzira yekubereka
Chikakananda chaicho chinokanganisa kuyerera kweropa kunzvimbo dzesikarudzi dzevakadzi nevarume. Yakagadzirirwa varume, izvi zvinogona kudzikisira kuita kwebonde. Kuti uwane vakadzi, izvi zvinogona kukonzera kusangana pabonde kusagutsikana nekungoderedza kudzikira kwekukwesana uye kugona kuzadzisa mugumo. Kusvuta kunogona zvakare kudzikisira kuita bonde mahormone mune ese evarume nevakadzi. Izvi zvinogona kukonzera kudzikisira kufarira bonde.
Kudzivirira kuputa kunonetsa, zvisinei, chiremba wako anogona kukubatsira iwe kuita zano. Kumbira kwavari kune mazano. Kune akasiyana akasiyana asinganyorerwe uye emushonga madhiragi ayo anotsigira iwe kurega. Iwe unogona zvakare kuchinja kune yedu yekurega yekurega kutsvagisa yepakati, iyo inowanzo kuve nezano, mishumo kubva kune vamwe, uye zvimwe. Uri kuenda kunowana zvese zvipfupi uye zvinogara kwenguva refu mabhenefiti ekumira kuputa. Sezvo kusvuta fodya kuchikanganisa chirongwa chevanhu vazhinji, kutsvaga zano rekusiya ndiro danho rekutanga iwe raunofunga kurarama hupenyu hwakareba uye hwakagarika.
Iwe unofunga izvi zvichiri kutaridzika?